Omume Azụmaahịa Ọha na ecommerce na 2020 | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | eCommerce, Azụmahịa
Nnukwu ewu ewu na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta emeela ka ndị na-ege ntị nwee ike ịzụta site na nyiwe mmekọrịta. Ndị ọrụ ịntanetị zuru ụwa ọnụ jiri nkezi nke 142 nkeji kwa ụbọchị na mgbasa ozi mmekọrịta na 2018, site na 90 nkeji na 2012, dị ka akụkọ GlobalWebIndex nke Digital Information World kwuru.
Otu n'ime ihe kachasị na mgbasa ozi ndị a bụ ihe e mere dị ka Social Commerce, ihe na-eme na ecommerce na 2020. N'ime nke a, obi abụọ adịghị ya na ọgụgụ isi azụmahịa bụ akụkụ dị ike na ya. Nke a emeela ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee mmetụta dị ukwuu n'àzụ ahịa ndị ahịa, yana 36% nke ndị ọrụ Internetntanetị na United States na-ekwu na mgbasa ozi ọha na eze abụrụla ihe dị mkpa dị ka isi mmalite nke ozi. Maka nhọrọ ngwaahịa, site na 27% na 2015, dị ka GfK Nyocha eMarketer kwuru.
Ka mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na-eto, azụmahịa ọha na eze na-aghọwanye ọwa dị mkpa n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ndị ahịa ejirila mgbasa ozi ọha na eze mụta banyere ngwaahịa na ụdị ma chọta mmụọ nsọ maka ihe karịrị afọ iri; Yahoo! webatara okwu a bu "social commerce" na 2005.
1 Azụmaahịa Ọha, nnukwu mkpa ya na ecommerce
2 Uto na mbata nke ndị ahịa ọhụrụ
3 Ọganihu azụmahịa na-aga n'ihu
4 Marketingzụ ahịa mmetụta ga-aga n'ihu na-eme ka mmadụ kwenye
5 Uto nke ọrụ izipu ozi nkeonwe
6 Ihe ntanetị mgbasa ozi
7 Integration nke ịzụta ọwa
Azụmaahịa Ọha, nnukwu mkpa ya na ecommerce
Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nyiwe na-arụ ọrụ iji kpochapụ esemokwu nke ịzụta ngwaahịa na ebe ọzọ mgbe ịchọtara ya na mgbasa ozi mmekọrịta, na-agbakwunye bọtịnụ ịzụta na obere akpa dijitalụ, dịka ọmụmaatụ, ka ndị ọrụ wee nwee ike ịzụta ihe.
Na Nkwupụta Azụmaahịa Azụmaahịa, Business Insider Intelligence na-atụle atụmatụ nke azụmaahịa mmekọrịta ọha na eze ugbu a, na-ebu amụma ọganihu ọ ga-enwe n'ọdịnihu, ma na-enyocha ihe kpatara uto ya ji kwụsị ugbu a, yana ihe kpatara nke ahụ ga-eji gbanwee. Anyị na-elekwa onyinye azụmahịa nke isi nke nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi ma nyochaa ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ọ bụla na oghere.
Uto na mbata nke ndị ahịa ọhụrụ
N'okwu a n'ozuzu ya, ekwesiri ighota na uto nke ikwuputa ahia ndi mmadu kwusiri na nso nso a n'ihi nchegbu banyere nchedo na iwu nke uzo.
Mana nnabata na ojiji na-akwado ịbawanye ekele maka mgbasa ozi nke mgbasa ozi mmekọrịta, mmetụta ya, yana ikike azụmaahịa na-emeziwanye nke nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Isi nyiwe gụnyere Instagram, Facebook, Pinterest, na Snapchat emeela ka ịzụ ahịa ahịa ha kawanye mma na-atụ anya ịbụ ụlọ ahịa dịka azụmahịa na-apụ.
Nnyocha ya dum
Kedu ụzọ ọ bụla, a na-atụle uru nke ahịa azụmaahịa US maka afọ ise na-esote. Maka ha, ọ dị mkpa ịme ihe ndị a anyị ga - edepụta site ugbu a gaa n'ihu:
Nyochaa ihe mgbochi na ndị na-eto eto na nnabata na ojiji nke azụmahịa ọha na eze.
Kpuchie atụmatụ ahia nke Instagram, Facebook, Pinterest, na Snapchat webatara ma kpaa nkata dị iche iche, ike na adịghị ike ha.
Nyochaa ụlọ ọrụ dị iche iche na-ekere òkè na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gụnyere ahịa na nyiwe ịkwụ ụgwọ na-eji ngwa mmekọrịta mmadụ na otu ha si dabaa n'ahịa azụmahịa.
You nwere ezigbo mmasị ịmara ihe kpatara Azụmaahịa Ahịa na-ewu ewu na ecommerce na 2020?
Ọganihu azụmahịa na-aga n'ihu
Sdị ndị na-achọpụta ahụmịhe dijitalụ ha n'ọtụtụ ọwa, dị ka mgbasa ozi mmekọrịta na e-azụmahịa, na-eguzobe uru asọmpi siri ike. Nke a ka bụ ikpe, na 55% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-azụ ahịa site na channelụ mgbasa ozi mmekọrịta, dịka Facebook, Instagram, ma ọ bụ Pinterest na 2018.
E nwere ihe ịrịba ama doro anya na azụmahịa ọha mmadụ ga-anọgide na-eto. Ulo oru e-commerce nke North America Absolunet achoputala onu ogugu ndi ozo:
87% nke ndị na-ere ahịa ecommerce kwenyere na mgbasa ozi mmekọrịta na-enyere ha aka ịme mkpebi ịzụta.
1 na 4 ndị nwe ụlọ ahịa na-ere site na Facebook.
40% nke ndị ahịa na-eji mgbasa ozi mmekọrịta na-emepụta ahịa.
30% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha ga-azụ ihe ozugbo site na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta.
N'ọnọdụ ọ bụla, anyị kwesịrị ịkọwapụta isi ụzọ atọ dị na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya:
Ekwentị mkpanaaka - Saịtị mgbasa ozi mmekọrịta dịkarịsịrị agagharị, ndị ọrụ na-atụ anya ahụmịhe nke na-enye ha ohere ịchọgharị na zụọ ahịa na ngwaọrụ mkpanaka ha.
Anya - sdị na-achọ ime mmetụta na mgbasa ozi mmekọrịta ga-anakwere omume nke "enweghị ntụkwasị obi" wee bụrụ nke a na-ahụ anya, nke nwere ike ịkọwa na nke ziri ezi.
Ntụkwasị obi - Branddị na-achọ ịbanye na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ kwesịrị ịchọ ụzọ iji wulite ntụkwasị obi ma mepụta ahụmịhe n'ịntanetị nke gosipụtara uru doro anya n'ịchọgharị na ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Ọ bụ ezie na usoro ndị a ka dị ugbu a, Achọrọ m ilebakwu anya na mpaghara ise azụmaahịa azụmahịa nke ndị ahịa kwesịrị ị attentiona ntị ma tụlee dịka akụkụ nke atụmatụ ahịa ha na-aga na 2020.
Meewanye oru ngo-e-commerce agbakwunyere
Dika ahia ndi mmadu na-achikota na ike, ufodu n’ime nhazi ndi emepere emepe na acho uzo imeziwanye ikike ha. Instagram na Snapchat bụ naanị ihe atụ abụọ nke nyiwe na-arụ ọrụ na ọrụ ecommerce agbakwunyere, na-enwe olileanya na ị ga-agbatị ngwa ngwa ngwa ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Na Machị, Instagram weputara atụmatụ ịkwụ ụgwọ ecommerce ọhụrụ iji lebara ihe ịma aka na-aga n'ihu anya nke ịnyefee ahụmịhe e-commerce na njedebe maka ndị ọrụ. Instagram Checkout na-enye ndị ọrụ Instagram ohere mezue ịzụrụ ngwaahịa na-ahapụghị ngwa ahụ, yana ịchekwa ozi nzụta maka ịkwụ ụgwọ n'ọdịnihu.
Azụmahịa mmekọrịta mmadụ ga-agbasa karịa ụzọ ndị edobere
Dika mgbasa ozi ndi mmadu na-aga n'ihu na-agbanwe, otu a ka onu ogugu na uzo di iche iche nke ndi mmadu gha agha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị ọhụụ ọhụrụ nwere ike ọ gaghị enwe usoro ịntanetị e-commerce dị ka ndị a kpọtụrụ aha n'elu maka Instagram na Snapchat, ndị na-azụ ahịa ka ga-atụ anya na ha nwere ike ịlele na ịzụta ngwaahịa n'ime oghere ha na-etinye oge ha.
Ngwa ngwa vidiyo TikTok amalitela ịnwale azụmahịa azụmahịa. Dabere na TechCrunch, TikTok amalitela ikwe ka ụfọdụ ndị ọrụ tinye njikọ na saịtị e-commerce (ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ) na profaịlụ profaịlụ ha, yana ịnye ndị okike ikike izipu ndị na-ekiri ha weebụsaịtị nke ịzụrụ.
A na-ahụta nkwagharị TikTok a dị oke mkpa n'ihi na ọ ga-enye ndị ụdị ohere ohere iru ndị na-ege ntị Gen Z, bụ nke mejupụtara akụkụ buru ibu nke ndị ọrụ 500 nde nke ngwa ahụ.
Marketingzụ ahịa mmetụta ga-aga n'ihu na-eme ka mmadụ kwenye
Ndị ọchụnta ego na-achọ ịmasị na azụmaahịa mmadụ kwesịrị ịchọ ịkwalite mmekọrịta ọhụrụ na / ma ọ bụ nke dị adị na ndị na-eme ihe iji melite iru, mkpakọrịta, na mmekọrita na ụdị ha.
Ihe ịma aka nke iguzo na ọwa na-elekọta mmadụ bụ ọgụ na-aga n'ihu mgbe niile maka ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa ga-achọta ụzọ ọhụrụ na ụzọ dị iche iche iji wee mata. Dabere na GlobalWebIndex, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị na-eji Intanet eme ihe na-ekwu na ha na-eji usoro mgbasa ozi na-eso ndị a ma ama, na-eru otu ụzọ n'ụzọ anọ nke Gen Zers ebe ha kachasị dị irè.
Ihe ewu ewu nke ndị na-eme ihe pụtara na 14% nke ndị na-azụ ahịa dijitalụ na-achọpụta banyere ụdị ọhụụ site na nkwado sitere n'aka ndị ama ama, yana 14% ọzọ site na blọọgụ nke ndị ama ama ma ọ bụ ụmụ nwanyị nyocha ngwaahịa, nke dị n'elu isi mmalite nke nchọpụta dịka ihe nkiri, redio, na akwụkwọ akụkọ.
Jiri uru ihe nlere na nke vidiyo mara mma mara mma
Ebili nke azụmahịa na-elekọta mmadụ ka ndị na-eto eto (Gen Z na Millennials karịsịa) na-achọ maka ụzọ ọhụrụ, ihe na-atọ ụtọ, na nke dị mfe iji chọgharịa na ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Dabere na eMarketer, ihe karịrị 55% nke ndị ọrụ ịntanetị Gen Gen Z ịntanetị - ndị na-eme ọkara nke ihe ejiji ha n'ịntanetị - kwuru na ịzụrụ ihe ejiji ugbu a sitere n'ike mmụọ nsọ nke mgbasa ozi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ puku afọ kwuru otu ihe ahụ:
Shoppingzụ ahịa ejiji sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi
Ihe omuma ndi mmadu a na-acho acho onu ogugu, ihe omuma karie, tinyere vidiyo. Dabere na nyocha nke imepụta mgbasa ozi vidiyo nke IAB 2018, mpaghara ahịa niile ahụwo mmụba nke itinye ego na mgbasa ozi vidiyo dijitalụ na nke mkpanaka. Kemgbe afọ 2016, ngụkọta vidiyo vidio ejirila 53% mụbaa ma ọ nwere ike ịga n'ihu na-ebili.
Uto nke ọrụ izipu ozi nkeonwe
Na 2019, eMarketer na-atụ anya ijeri mmadụ 2.52 n'ụwa niile, ma ọ bụ 87.1% nke ndị ọrụ ama, iji ngwa izi ozi mkpanaka otu ugboro n'ọnwa:
Ekwentị ozi ngwa ngwa gburugburu ụwa. Ọganihu a n'iji ngwa ngwa ozi, nke gụnyere Snapchat, WhatsApp, na Facebook Messenger (nke ikpeazụ nke Facebook), nwere ike inwekwu mmetụta otú ndị ahịa si etinye aka na ụdị na mpaghara mkpanaka.
Omume izugbe na ngwa izipu ozi na ngbanwe nke ngwa ọrụ azụmaahịa (dịka ndebiri ozi adresị na katalọgụ azụmaahịa na Facebook Messenger na WhatsApp, n'otu n'otu) na-egosi na nke a nwere ike ịbụ ebe bụ isi elebara anya na 2020. N'ezie, WhatsApp Katalọgụ azụmaahịa bụ mmepe na-atọ ụtọ, ebe ọ ga - enyere ndị ọrụ aka ijikọ na ụlọ ọrụ dị mkpa, kamakwa nye ha ohere ịhụ ihe dị na ụlọ ọrụ na - enweghị ịhapụ ikpo okwu.
Ka mgbasa ozi mmekọrịta na-aga n'ihu na-eto ma na-agbanwe, azụmahịa ọha na eze ga-agbaso, na-enye ndị na-azụ ahịa ọtụtụ nhọrọ na ụzọ iji chọgharịa ma zụọ ahịa n'ime ọwa mmekọrịta dị iche iche. Ọ bụ ezie na isi nyiwe kachasị kachasị mma maka azụmahịa ha na-enye, ndị bịara ọhụụ dị ka TikTok na-amalite ịnwale na nnwale, na-eru ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ndị na-eto eto na-apụ na ndị isi ugbu a.
Dị na-achọ inyocha azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ọnwa 12 na-esote kwesịrị ile anya iji nwaa ma mụta iji nyiwe dị iche iche, mana cheta ileba anya karịa gụnyere 'ịzụta' bọtịnụ. Dabere na GlobalWebIndex, ndị na-azụ ahịa na-eji ọtụtụ ọwa eme ihe mgbe ha na-azụ ihe n'ịntanetị, ya mere, a ga-eji ọwa mmekọrịta na njikọta yana, yana mgbakwunye na, ọwa ahịa ndị ọzọ iji nye ahụmịhe ndị ahịa na-agbanwe agbanwe n'ofe ọ bụla nke njem ịzụ ahịa.
Ihe ntanetị mgbasa ozi
Ihe ntanetị mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike, na-agbanwe agbanwe na teknụzụ mgbe niile, na-akpata mgbanwe, na ọganihu a na-eme iji wepụta ahụmịhe mara mma ma dị elu. N'otu aka ahụ, ihe ndị ahịa na-achọ na-agbanwe mgbe niile ma na-agbanwe agbanwe, na-eme ka o siere ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na azụmahịa aka ịnagide ha. Ndị ahịa na-achọ otu ụlọ ahịa ebe ha ga-ezute nchọgharị ha na ịzụ ahịa ha.
Azụmaahịa mmekọrịta ọha na eze apụtawokwa dị ka usoro megidere iji zute ndị ahịa a chọrọ site na ijikọ ahụmịhe ịzụ ahịa na igodo mgbasa ozi mmekọrịta.
Azụmaahịa mmekọrịta bụ ịdị n'otu nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na nchọgharị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe netwọkụ mmekọrịta dịka Instagram, Facebook, YouTube na Pinterest na-erigbu dị ka ụzọ isi kwalite na ire ngwaahịa na onyinye nke ụlọ ọrụ.
Azụmaahịa mmekọrịta bụ ihe dị oke mkpa n'ụwa taa dịka ọ na-ebelata njem nke onye na-azụ iji nyocha, chọta, tụlee, nyochaa na ịzụta ngwaahịa sitere na ibe weebụ na weebụsaịtị dị iche iche. Ọ na-emekwa ka mmụọ nsọ bụrụ ebe a na-ere ya, na-enye ndị ọrụ ohere ịzụta ya n'oge na-ejikarị ọnụọgụ kachasị site na netwọkụ mmekọrịta.
Isi uru nke azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ na ọ na-ekwu okwu banyere ọnụọgụ ego dị elu, mgbanwe dị ala, ịgbahapụ ụgbọ ala, yana njikọ aka dị ala nke azụmahịa na-eche ihu na ntanetị dijitalụ. Ekwuru na 30% nke ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, ma ọ bụ 500 nde ndị ọrụ kwa ụbọchị, chọrọ ịzụta ngwaahịa kpọmkwem site na ikpo okwu. Nke a bụ ihe akaebe nke ihe kpatara azụmahịa azụmahịa ji dị mkpa maka azụmahịa n'ịntanetị.
Anyị edepụtara ụfọdụ usoro azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe gị nke ị nwere ike ịmụta afọ a. Ọ ga - enyere gị aka ịdọta ndị na - eduga, nweta ntụgharị ka mma, bulie mmata, ịbanye njikọ aka, na ịbawanye ego.
Ihe oyiyi ngwaahịa dị elu
Mwekota nke onyonyo ngwaahịa dị elu, vidiyo dị ndụ, vidiyo nyocha ngwaahịa, yana ọdịnaya ihe eji eme ihe na-ejide ndị ọrụ ngwa ngwa ma tinye ha maka itinye aka na azụmahịa ogologo oge.
Anyị niile ahụtala nke a n'oge ụfọdụ na ndụ anyị mgbe anyị chọrọ ịzụta ihe anyị hụrụ na soshal midia mana anyị amaghị ebe anyị ga-achọ ya.
Azụmaahịa azụmahịa na-eme ka ọ dị mfe maka anyị site na ijikọ ihe ngosi nke ngwaahịa na nhọrọ ịzụta, na-eme ka ndụ ndị na-eri ihe dị mfe ma dị mfe.
Integration nke ịzụta ọwa
Site na mmetụta na-eto eto nke mgbasa ozi mmekọrịta na ndụ ndị mmadụ na mkpebi ha na ndụ n'ezie, nyiwe mmekọrịta mmadụ na mba ọzọ na-azụ ahịa ọwa ha iji mee ka ha maa mma ma na-atọ ụtọ.
Ọdịnaya enwere ike ịzụta bụ nke anakọtara na foto na vidiyo nke onye ọrụ na-ewepụta na ngwaahịa, site na hashtags, mkpado na aha nke Instagram, Facebook na Twitter, nke na-enye ndị ọbịa ohere ịzụta ngwaahịa ahụ ozugbo na post.
Kama ịkwalite ngwaahịa ndị ahụ site na ọdịnaya wee zigharị ndị nwere mmasị na ibe ngwaahịa ma ọ bụ weebụsaịtị. Ha kwesiri ire ya ozugbo na ọdịnaya nkwado.
Nke a ga - echekwa oge, ego na mbọ maka azụmaahịa na ndị ahịa. Na mgbakwunye, ọ bụ ịgagharị n'ogige ahụ iji mee ka ọkwa ọ bụla bụrụ ọnụ ọnụ site na iji iji ma mejuputa ngwa ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Na-akwalite ihe ngosi mmadụ site na UGC
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na UGC na-enweta 50% itinye aka, ọkachasị ire ahịa site na ọdịnaya UGC na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7 ugboro karịa mmasị na njikọ aka. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nyiwe na-arụ ọrụ iji wepu esemokwu nke ịzụrụ ngwaahịa na ebe ọzọ mgbe ịchọtara ya na mgbasa ozi mmekọrịta, na-agbakwunye bọtịnụ ịzụta na obere akpa ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Azụmaahịa Azụmaahịa mmekọrịta na ecommerce na 2020
Ekele diri oke ederede
Omume nke akparịta ụka na azụmahịa kọmputa